🥇 ▷ Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A ayaa hadda lagu cusbooneysiin karaa Android 9 Pie ✅
Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A ayaa hadda lagu cusbooneysiin karaa Android 9 Pie
In kasta oo Xiaomi ay markii hore diidday inay cusboonaysiiso Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A ilaa Android 9 ee hoos timaada MIUI 10, shirkaddu waxay si fiican uga fikirtay waxayna bilawday beta macaamiisha Shiinaha. Hadda, shirkadda ayaa hadda bilaabatay cusboonaysiinta si rasmi ah loogu talagalay dhammaan kuwa leh mid ka mid ah aaladahaan. Sida caadiga ah waxay ku dhacdaa wixii cusboonaysiin ah oo u qalma, Android 9 wuxuu ku imaan doonaa hab la yaab leh dhammaan waddammada ay ku iibiyaan marinnada.
Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad leedahay ‘Xiaomi Redmi 6’ ama Redmi 6A, waxay u badan tahay inaad ka heli doonto farriin deg deg ah shaashaddaada moobiilka ah ee kuu sheegaysa cusboonaysiinta. Haddii toddobaadyadu ay socdaan oo aysan sidan oo kale ahayn, waad iska hubin kartaa adiga oo ka soo dejinaya goobta, qaybta cusboonaysiinta softiweer. Android 9 Pie waxaa ka mid ah lakabka isbadaynta ee shirkadda MIUI 10 iyo kormeerka amniga July. Waxay leedahay culeys dhan 1.3 GB, marka waa lagama maarmaan inaad haysatid booskan waqtiga cusboonaysiinta.
Android 9 oo leh MIUI 10 ayaa la yimid warar xiiso leh iyo horumar. Mid ka mid ah waa habka mugdiga ah ee mudada dheer la sugayay, kaas oo mugdi gelinaya aragtida, ma aha oo keliya aragtida ah inay isdejiso, laakiin sidoo kale aaladda inay ku batto batari ka yar. Waxa kale oo aad arki doontaa wakhtiyo dhakhso u rarista, mahadi haysa nidaamka wax ka barashada dhaqankeena adoo filaaya. Noocyada kale ee cusub waa suurtagalnimada in lagu sameeyo sawirro bokeh leh mobiil kasta, oo aan ku koobneyn kuwa leh ‘labo sensor’. Dabcan, Android 9 Pie oo leh MIUI 10 waa mid ka sii jilicsan uguna yaraan intii hore, oo naga caawinaysa inaan shaqaysanno oo aan u adeegsanno barnaamijyada culus.
Sida aan had iyo jeer kugula talinno markii aad casriyeynayso, iskuday inaad ku sameyso meel leh xiriir deggan oo aamin ah. Ka fogow WiFis furan oo furan. Dhanka kale, aad Xiaomi Redmi 6 ama 6A aad si buuxda u xukunto waqtiga cusboonaysiinta. Sidookale, iskuday inaad sameyso nuqul raadis ah ee dhamaan xogtaada iyo feylashaada haddiiba ay wax dhacaan inta howshu socoto.
Warar kale oo ku saabsan… Android 9